Shiinaha AI Germ-dilidda Robotyada AIStrike Soo-saar iyo Warshad | Doneax
3) Wax ku ool ah, bey’ada u fiican, deg deg ah (ilaa 5 daqiiqo)
7) marin otomaatig ah, kahortag carqalad otomaatig ah, jeermis otomaatig ah, dib u buuxin otomaatig ah
Aaladda ultraviolet-ka ee sterilizer garaaca wadnaha oo moobil ah
(Aaladda garaacista aaladda disha jeermiska fudud ee maskaxda lagu garaaco) xuduudaha farsamada ee AIStrike
1) Isticmaal habab jireed si aad jeermiska u disho.
2) Nalalka garaaca wadnaha, dhererka qotoma ≥370 mm, iftiinka soo noqnoqda 2 Hz, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa laambada
Nolosha tuubada, isticmaal cabirrada.
3) Tirada ku shubida iyo soo deynta korantada ka saareysa danab sare waa ≥50 milyan oo jeer, nidaamkuna wuxuu si otomaatig ah u ogaadaa xaalada cabirka kaabista wuxuuna xasuusinayaa in la badalo capacitor ka dhacay.
4) Amraya danab aqbasho raso: 220V / 50HZ, danab wax soo saar: 48V15A.
5) Cunsurka madhalaysnimada, garaaca wadnaha oo dhererkiisu dhan yahay 200-1100nm oo ay ku jiraan 200nm-315nm
Wave band ultraviolet, ultraviolet pulsed leh dhererkiisu yahay 250nm-280nm (1 mitir) tamar ≥60000uw / ​​cm2.
6) Heerka dilka ee Acinetobacter baumannii AB-CR ka dib 5 daqiiqo oo shucaac ah waa ≥99.9%,
Ka dib 5 daqiiqo oo shucaac ah, heerka dilka Candida albicans waa ≥99.9%,
7) Qiyaasta dilka ee MRSA ≥99.9% ka dib soo gaadhista tiknoolajiyad isku mid ah iyo nooc isku mid ah oo alaab ah muddo 5 daqiiqo ah (3 mitir)
Heerka dilka ee Pseudomonas aeruginosa kadib 5 daqiiqo oo irradiation ah (3 mitir) waa ≥99.9%.
8) Qiyaasta dilka ee Klebsiella pneumoniae ≥99.9% ka dib markii ay soo gaadho isla tiknoolajiyad iyo nooc isku mid ah oo alaab ah 5 daqiiqo (3 mitir),
Qiyaasta dilka ee Acinetobacter baumannii ≥99.9% kadib markii la shubay 5 daqiiqo (3 mitir),
Heerka dilka bakteeriyada dabiiciga kadib 5 daqiiqo oo shucaac ah (3 mitir) waa ≥99.7%.
9) Waqtiga jeermiska lagu diro 5-10 daqiiqo, radius jeermiska kama yaraysto 3 mitir, howsha tirinta jeermiska ayaa loo dejin karaa iyadoo loo eegayo cabirka walaxda jeermiska iyo qolka; waqtiga tirinta ayaa la dejin karaa lana arki karaa;
10) Tuubada laambada si otomaatig ah ayaa loo kiciyaa oo loo soo dejiyaa, istaroogga kor u qaadaana kama yarayo 50CM. Tuubbada galaaska quartz-karka badan ee la soo dhoofiyay ayaa loo isticmaalaa jeermiska-permeability-ka iyo jeermiska la isaga diro. Dusha sare waxaa lagu qalabeeyaa shaandho ozone filter ah si ay u jajabiso oo loo sifeeyo ozone.
11) Aluminium dusha sare ah oo laga soo dhoofiyo aluminium ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo dusha sare ee milicsiga. Iftiiminta muraayadaha dusha sare ee aluminium waa ≥90%, taas oo kordhinaysa tamarta iftiinka banaanka u baxa.
12) Nidaamku waa diyaar inuu isticmaalo. Shaqada ka dib, qiyaasta ozone waa ≤0.1mg / m³ (warbixinta baaritaanka ayaa la bixiyaa), mana jiro waxyeello soo gaadhay deegaanka sida qalabka, balaastig bir ah, daaqadaha gidaarka, daahyada, iwm.
13) 7-inch smart capacitive touch screen, softiweerka shaashadda taabashada wuxuu leeyahay shaqooyin xusuusin dhammaystirka jeermiska, kor u qaadista laambadda, laambadda hoos u dhigaysa, billow biligleynaya, joojinta biligleynta, dejinta nidaamka, dejinta cabbirka iyo badhamada kale ee shaqada. Hawlaha maaraynta caqliga, raadinta otomaatiga ah ee habka jeermiska, duubista tooska ah ee macluumaadka la xiriira ee jeermis kasta, nidaamku wuxuu si otomaatig ah u ururiyaa xogta qayb kasta oo ka mid ah nidaamka, wuxuuna leeyahay qalab qaylo-dhaan otomaatig ah. Foomka kumbuyuutarka kumbuyuutarka ee kumbuyuutarka ayaa leh shaqooyin la mid ah shaashadda taabashada ee qaybta ugu weyn.
14) Waxay leedahay shaqooyinka si otomaatig ah loo iskaan u dhigto loona kaydiyo khariidada, marin toos ah, dib u soo kabasho toos ah, ka hortag carqalad otomaatig ah, qaylodhaan otomaatig ah iyo shaqooyin kale, iyada oo aan la helin faragelinta gacanta, jeermiska otomaatiga ah
15) Isticmaalka moduleka iskaanka leysarka, laba qaybood oo kamarad 3D ah iyo radar ultrasonic, ka hortag carqalad otomaatig ah iyo marin toos ah.
14) Isdhexgalka caqliga leh, waxaad si fudud uguheli kartaa softiweerka maareynta daruuriga ah ee caqliga si aad uqadato la socodka xaalada mashiinka, duubista xogta, weydiinta, raadinta iyo howlaha kale
15) Soo-saaruhu wuxuu dhaafey shahaadada SIO9001, isla sheyga tikniyoolajiyaduna wuxuu dhaafey shahaadada CE, isla alaabada teknolojiyaddu waxay leedahay warbixin raadin cusub, isla sheyga tikniyoolajiyaduna wuxuu leeyahay shahaado patent ah.
16) Isla badeecada farsamo waxay siisaa liiska isticmaaleyaasha 10 isbitaal gudaha ah oo ka sarreeya Fasalka A.
Nooca Qalabaynta Ilmo-galeenka ee Ultrasonic
Lambarka Moodalka AIStrike
Midab Cawl qalin ah
Waqtiga jeermiska la isaga dilo 5-10Minti
Dhererka qaansada iftiimiya 70370mm
Raadiyaha jeermiska aan ka yarayn 3 mitir
Garaacista laambadda aan ka yarayn 50CM
Fiirsashada Ozone shaqada ka dib .10.1mg / mitir cubic
smart taabashada karti capacitive 7 inji
Nolosha Siraad 4 milyan jeer
Miisaanka saafiga ah 115kg
1) Gawaarida otomaatiga ah: Iyada oo leh nidaam dhamaystiran oo terminal ah, ka dib marka aagga jeermiska la dejiyo, qalabku wuxuu ku yimaadaa halka loo socdo iskiis ahaan;
2) Ka-hortagga carqaladda otomaatiga ah: Markaad la kulanto caqabad, qalabku wuu iska ilaalin doonaa keligiis, qorsheynayaa waddo cusub, wuxuuna imaan doonaa aagga jeermiska;
3) Dib-u-cusbooneysiinta otomaatiga ah: Marka batterigu aanu ku filnayn, qalabku wuxuu si otomaatig ah ugu laaban doonaa tuubada loogu talagalay ee lagu buuxiyo;
4) jeermiska maskaxda lagu dilo: U gal waaxda si jeermiska loo diro iyadoo loo raacayo wadada loo qorsheeyay, shaqaalaha caafimaadna uma baahna inay si toos ah u galaan qeybta, iyagoo si hufan uga fogaanaya infekshinka is-gudbinta.
AI Pulsed Light Germ-dilka Robots
1) Waqtiga jeermiska ee yar: 5 daqiiqo oo jeermiska jeermiska lagu dilo, waadhadho badan ayaa jeermiska lagaafin karaa maalin kasta;
2) Masaafada ballaaran: radius-ka jeermiska ayaa gaari kara 3m, iftiinka iftiinka iyo diirada shaandhada ayaa si toos ah u iftiimin kara dusha sare ee xiriirka inta badan, isla markaana gacanta ku nadiifin kara meelaha si fudud loo dayacay, oo ka saari kara jeermiska si guud iyo si hufan;
3) Nadiifinta nadiifka ah ee loo yaqaan 'ultra-pulsed ultraviolet (200-315nm) iyo jeermiska buuxa ee tiknoolajiyadda iyo jeermiska dhalmada ayaa dili kara jeermiska iyo bakteeriyada daawada u adkeysata;
4) Hawlgal ku habboon: nidaamka maareynta softiweerka caqliga ku salaysan ee daruuriga ah, diyaarna u ah in la isticmaalo;
5) Ilaalinta deegaanka iyo waara: waxyeello iyo jeermis dil, ma jiro haraaga kiimikada, haraaga waxyeello ma leh.
Nalalka Xenon 1 gabal
Muraayadaha anti-UV 2 lammaane
Kiniiniga PC 1piece
Robot software-ka aasaasiga ah 1 ayaa lagu daray mashiinka oo dhan
Xidhitaanka lacag bixinta 1 dhigay
Xarig koronto 1piece
Phillips darawal 1piece
Xiga: Jeermiska-dila Robotyada PulseIn-D